AbakwaXhosa bafuna okufana ne-Ingonyama Trust – Ubukhosi
Home/ Ubukhosi noMhlaba/AbakwaXhosa bafuna okufana ne-Ingonyama Trust
UKumkani uSigcawu wakwaXhosa
UZulu, abakwaXhosa nabaThembu bami ndawonye kwelomhlaba woBukhosi bathi awungemukwa nguHulumeni
NGALESI khathi kukhona ukukhuluma cishe kuzo zonke izinkalo mayelana nodaba lomhlaba kuleli obunye uBukhosi obuhlonishwayo kuleli sebuphumele obala bavikela umhlaba woBukhosi ongaphansi kwe Ingonyama Trust. UBukhosi bakwaXhosa obuholwa yiKumkani uSigcawu sebuqinisekisile ukuthi buzoma noZulu odabeni lomhlaba. Baphinda lokho okukhulunywa ngamaKhosi ezizwe ukuthi kulo mthetho ohlongozwayo wokubuyiswa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo, awungathintwa umhlaba woBukhosi.
Okhulumela iKumkani uSigcawu, iNkosi uXolile Ndevu uthi, uma uZulu uqoma ukungena emgwaqeni, amaKhosi akwaXhosa ayoba yingxenye yalokho. “Yize singenaso isakhiwo esifana ne Ingonyama Trust lo mbiko (umbiko weThimba likaMotlanthe) usithinta sonke. Umbono wethu uthi umhlaba awubuyiselwe eBukhosini ukuze wabelwe abantu,” kusho iNkosi uNdevu.
UKumkani uDalindyebo wabaThembu
Okhulumela iKumkani yabaThembu u-Azenathi Zanelizwe Dalindyebo, iNkosi uZwelenqaba Mgudlwa obenza isethulo esigcawini ebesizwa izimvo zabantu ngodaba lokuguqulwa komthethosisekelo uthe umhlaba awubuyele eBukhosini. “UBukhosi nomphakathi ongaphansi koBukhosi yibo okumele bengamele umhlaba. Lokhu kungefana nalokho okwenziwa yi-Ingonyama Trust,” kusho iNkosi uMgudlwa. Ugcizelele ukuthi umhlaba okukhulunywa ngawo wathathwa eBukhosini. Wenze isibonelo sokuthi kwaXhosa zalala izinsizwa ezimpini eziyisi-8 kubhekenwe namadlagusha. Odabeni lokweseka Ingonyama Trust, iNkosi uMgudlwa uthe bazolinda uBukhosi bukaZulu ukuba buxhumane nobakwaXhosa njengoba okwamanje uhlaka okukhulunywa ngalo likwaZulu-Natal.
Leli phephandaba lingakuqinisekisa ukuthi nembala kukhona ukubonisana okukhona nokungahle kugcine kuzale umhlangano omkhulu woBukhosi. Ngokuthola kwephephandaba ISILO sijube ikomidi (abaKhongi) ukuba lihlele izingxoxo nezinhlaka ezahlukene ezibandakanya uBukhosi, izifundiswa, amaqembu epolitiki nezinye. Lokhu kuxhumana sekuvele kuqalile njengoba sekubekhona ukuxhumana noMengameli wezwe nowe-African National Congress kanye nezinhlangano zamaBhunu.
Ngokombiko weBAYEDE okuyiphephandaba elinguzakwabo woBukhosi amaBhunu asephumele obala.
UMholi we-AfriForum uMnu uKallie Kriel
Leli phephandaba licaphune uMnu uKallie Kriel we-AfriForum ethi, “AmaBhunu ami noZulu odabeni lomhlaba woBukhosi nowenganyelwe yiSILO. UKriel uhole ithimba lezinhlangano zamaBhunu ebeziyokotha Ongangezwe Lakhe. Phakathi kwalabo abebehamba noKriel bekukhona uMnu uFlip Buys onguSihlalo weSolidarity Movement, uSolwazi uDanie Goosen, uSihlalo weFederation of Afrikaans Cultural Organisations (FAK) kanye nesekela lakhe uKriel uMnu uBarend Uys.